Ube | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Ụdị pears "Allegro": njirimara, uru na nkwekọrịta
Osisi ube bụ ndị ọbịa na-abịakarị n'ogige. Ilekọta mkpụrụ osisi ndị a dị mfe, ị nwere ike iri nri na mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ ruo mgbe mmalite nke oyi. E nwere ihe karịrị puku atọ dị iche iche n'ụwa, ma anyị ga-etinye akwụkwọ a na Allegro pears - na-edetụ ha ire, ị ga-anọgide na-enweghị mmasị. Akụkọ banyere ịzụlite n'afọ 2002, na Ụlọ Ọrụ Na-eme Nnyocha nke Genetics na Nhọrọ nke Osisi Mkpụrụ osisi aha ya
Atụmatụ kachasị mma maka nlekọta na ịkụkwa mkpụrụ osisi pearl Lada n'ubi ya
Ọmarịcha, acha uhie uhie ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọgaranya, mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi sugar nwere ogologo oge a weere dịka otu mkpụrụ kachasị mmasị. Ube na-eweta mmetụta nke saturation, ya shuga pulp na-agbazekwa n'ọnụ gị. A maara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị ube, mana otu n'ime ụdị mmasị kachasị dị iche iche bụ Lada pearries. Taa, anyị ga-ekwurịta banyere ihe ndị a na-ahụ maka ịzụlite ụdị dị iche iche, banyere ihe niile metụtara nlekọta Lada.
Otú e si emeso pests pears
Mkpụrụ osisi nile a kụrụ na-ata ahụhụ site na mwakpo ndị na-efe efe, ọ bụghịkwa na pears. Ejila ihe ọ bụla chebe osisi dịka ọ dịkarịrị ala, n'ihi na nke a nwere ike ibute ọ bụghị naanị ọnwụ nke ihe ọkụkụ ahụ, kama osisi ahụ dum. N'ebe a, ndị na-eto eto na-echegbu onwe ha banyere ajụjụ ahụ: "Olee ụmụ ahụhụ dị ize ndụ, oleekwa ihe a ga - eji mee ya ka pests nke pear ruo mgbe ebighi ebi?
Ụdị ube "Nika": ihe ziri ezi na njirimara nke nlekọta
Nkpuru osisi mara mma na-eme ka obi di ha uto ma nwee obi uto na obi uto ha na aro ha. Otu n'ime ihe ndị a kasị mara amara bụ pears dịgasị iche iche "Nika", ihe gbasara nke anyị ga-atụle n'isiokwu a. Nkọwa nke ube nke ọkwa "Nika" Nke dị elu nke osisi nke "Nika" dịgasị iche, ọ bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu.
Nhọrọ nke ntụziaka maka owuwe ihe ubi maka oge oyi
Egwu pears na ubi na-egosi njedebe oge okpomọkụ. Ị nwere ike ịchekwa otu mpempe site na ịkwadebe mkpụrụ osisi a na-acha ọkụ n'oge maka oyi. Jams, jams, marmalades, compotes, syrups na mkpụrụ osisi amịlị, tinyere ihe oriri ndị e ji ha mee, ga-eme ka ụbọchị oyi na mgbede na-egbuke egbuke. Nchịkọta ntụ ọka bọta Ezi ntụziaka maka ube blanks maka oyi dịgasị iche iche, na ọ fọrọ nke nta ka ha niile kwadebere n'enweghị usoro nlekọta ọgwụgwọ.
Ụzọ na-egbute pears maka oyi
Pear bụ mkpụrụ osisi magburu onwe ya ma dị mma nke a ga-eji mee ihe ọ bụghị naanị na ụdị nke ya ma ọ bụ n'ụdị jams, jams, marmalades, mkpụrụ osisi stewed, wdg, kamakwa dịka ihe mgbochi nke na-enye nụ ụtọ zuru ezu ma ihe oriri ma nri anụ na azụ. A na-edebe ụfọdụ pears nke ọma ruo mgbe oyi na-atụ, ma ajụjụ banyere otú e si egbute ọka ugbo nke ọma maka oge oyi na-anọgide na-aba uru maka ọtụtụ ndị ụlọ nwanyị.
Uru na nsogbu ndị na-eri nri
Emere ube a ruo ihe karịrị puku afọ atọ. N'ime ọhịa, ọ na-etolite na Eurasia ruo mita 60 nke dị n'ebe ugwu. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ebe obibi oge ochie nke domestication nke ube ọhịa - oge ochie nke China na Asia Minor, ma ebe a na-azụlite ya amachaghị. Nri uto na ihe oma di nma mere ka otu nkpuru kachasi nma (enwere uzo di iche iche di iche iche di iche iche).
Pear "Elena": uru na nkwekọrịta nke iche, ịkụ na nlekọta
Kemgbe oge ochie, pear abụwo osisi osisi kachasị ewu ewu. Isiokwu a ga - enyere gị aka ịkwanye ube nke "Elena" dị iche iche n'enweghị nsogbu ọbụla ma nwee mkpụrụ osisi ya tọrọ ụtọ. Egwu pears nke dịgasị iche iche "Elena" Ube "Elena" bụ oge oyi n'oge. Nke a bụ mkpụrụ osisi mkpụmkpụ osisi nke nwere okpueze pyramidal.
Chọrọ ọtụtụ ube: nkọwa, njirimara nke ịkụ na ịchekwa
Pears, nke kachasị osisi na-anaghị achọ nlekọta pụrụ iche ma ọ bụ ọnọdụ na-eto eto. Ekele nye ndị na-azụ anụ, ndị na-elekọta ubi n'oge a nwere ohere iji mejupụta mkpokọta osisi ha na-amị mkpụrụ dị iche iche dị mma maka ịkọ ihe na ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe dị iche iche. Akụkọ banyere iche iche nke pears "Rogneda" Pears dịgasị iche iche "Rogneda" - mkpụrụ nke ndị ọrụ ozuzu Russia.
Kasị mma ndụmọdụ na kwe nkwa maka na-eto eto ube iche Augustus igirigi
Taa, a na-agbazi ọtụtụ ụdị pears, n'etiti nke igirigi nke August nwere ebe kwesịrị nsọpụrụ. O wee hụ ndị na-elekọta ubi n'anya maka enweghị atụ na mmesapụ aka. Kedu ihe ọzọ bụ igirigi Augustus nke dị ịrịba ama, yana nkọwa ya na iwu nke nlekọta, anyị na-akọwa n'okpuru ebe a. Ube Avgustovskaya igirigi: nkọwa nke dịgasị iche iche Avgustovskaya igirigi e bred ke 2002 site na-agafe iche nke Ụtọ na Mwakpo Pakgam site ama ama breeder S.
Iwu kachasị mma na aro maka ịkụ osisi pears na mmiri
Osisi bu uzo kachasi mkpa nke ubi ugbo. Ọ bụrụ na e mepụta ya n'ụzọ na-ezighi ezi, mgbe ahụ, ezi owuwe ihe ubi ga-agbazi ruo ogologo oge, ma ọ bụ, ikekwe, ị gaghị atụ anya na ọ dịghị owuwe ihe ubi ọ bụla. Olee otu esi choputa oge maka akuku? Ya mere, aj uj u mbu bilitere maka onye oru ugbo nke choro igba osisi: mgbe ka o di mma karite ube na mmiri?
Kedu otu esi chekwaa ube si nchara?
Ngwurugwu na-emebi nchara mara onye ọ bụla na-elekọta ubi n'ubi ya ka ube ọ bụla na-etolite. Ọrịa a ọ bụghị nanị na ọ na - emebi ọdịdị nke osisi ahụ, ma na - emebi osisi ahụ. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi amata ọdịiche nke nchara na ube site na ọrịa ndị ọzọ, ọ dị ize ndụ, na otu esi emeso ya.
Esi kpochapụ moth na pears
Otu n'ime pests ndị kasị dị ize ndụ nke ndị na-elekọta ubi na-ezute mgbe eto osisi pear bụ ọgwụ ahụhụ. Ogwu a nwere ike imeri ihe nile di n'ime osisi a n'obere oge. Pearsheet chọrọ ịrụ ọrụ nke oma, ozugbo na, nke kachasị mkpa, usoro ihe ọkụkụ-nchekwa dị na ya.
Esi kuta ube na mmiri: nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ntughari ugbo ugbo bu uzo ogwu na-adi nma, site n'enyemaka nke i nwere ike imeghari ubi gi na ihe oriri gi, nweta ohere iji wepu nkpuru osisi varietal sitere na ube ndi ozo ma obu osisi ndi ozo. Na njedebe, ọ nwere ike ịbụ ihe ịchọ ịmata ihe ọhụrụ. Ihe kpatara ya nwere ike ịdị iche, mana ọ naghị afụ ụfụ ịmụ ihe ọmụmụ, tupu ịmalite ịrụ ọrụ na-akpali mmasị nke ndị na-azụlite - ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Anyị na-amata otu ugo nke "Krasulya"
"Krasulya" bụ ọtụtụ mkpụrụ osisi pear na-eto eto, ndị a ma ama na ndị a hụrụ n'anya n'etiti ndị na-elekọta ubi maka ịmị mkpụrụ osisi na ọpụrụiche na-emepụta ihe. N'ihi otutu oyi oyi, ube nwere ike itolite na mpaghara ebe oyi na-acho. Ihe omumu nke pears "Krasulya" Pears "Krasulya" - ihe omumu nke ndi sayensi nke Ural Scientific-Research Institute for Horticulture and Potato,
Pear "Petrovskaya": nkọwa, ịkụ na nlekọta, uru na ọghọm dị iche iche
A na-eri ọtụtụ pears "Petrovskaya" n'afọ 1959 site n'ịgafe ụdị ụfọdụ. Osisi nwere ogo dị elu na okpueze nke okpueze ahụ, ogbugbo ahụ na-acha aja aja ma dị mma. Isi alaka ndị dị n'akụkụ ogwe aka dị n'akụkụ aka nri. Alaka ndị gbagọrọ agbagọ, ndokwa ha dị obere, na-arịgo elu ma n'akụkụ. Mkpụrụ osisi - ụdị dị.
Esi tufuo skaab na ube
Ube bu osisi mara nma nke puru ibu ihe omuma nke ugbo. Ma gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ osisi n'anya na-egbu mberede site na scab? Kedu ihe dị ize ndụ na ebee ka Scab si bịa - ọrịa a na-ahụkarị na osisi nke ọnọdụ ihu igwe. Na causative gị n'ụlọnga nke ọrịa bụ marsupial ero Venturia pirina.
Pear "Mmanụ aṅụ": àgwà, cultivation agrotechnics
Mkpụrụ "Mmanụ aṅụ" na-esi ísì uto, na-atọ ụtọ, na-enwetakwa mmanụ aṅụ. Osisi na-ewe obere oghere n'ime ogige ma bụrụ ndị na-enweghị nchebe na mmezi. Ọbụna eziokwu ndị a na-ezuru mmasị ndị na-elekọta ugbo n'ọtụtụ dị iche iche nke pears. Akụkọ ihe mere eme na mpaghara ebe a na-azụlite Na 1964, otu ndị ọkà mmụta sayensị dị na Crimea jisiri ike ịzụlite ụdị dị iche iche nke pears - "Honey".
Ube "Ụtọ": àgwà, uru na ọghọm
N'ihi nlekota nke ndi pears na-acho n'inwe otutu ndi mmadu ma na-eto n'ime ihe ubi. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-eji ihe dị iche iche dị iche iche dị elu na-eme ka oyi sie ike ma dị mfe nke mmezi, yana àgwà ọma dị mma nke mkpụrụ osisi ahụ. Ma mkpụrụ ndị a abụghị naanị ihe tọrọ ụtọ, ma ọ bara uru, ha nwere nnukwu vitamin na mineral.
Ugwu dị iche iche "Century": àgwà, uru na nkwekọrịta
Ube bụ otu n'ime mkpụrụ ndị na-amị mkpụrụ a kụrụ. Taa, otu ihe dị mkpa na-eto osisi a bụ iguzogide oyi na ọrịa. Nanị ụdị dịgasị iche iche bụ osisi pear "Century". Mgbe ị gụchara nlekọta nke osisi a, ị nwere ike ịmepụta mkpụrụ ka ukwuu n'ime ubi gị.
Chinese chin: nkọwa, bara uru njirimara na contraindications
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara na ube ndị China bụ àgwà dị nro, nke dị ncha - nke na-atọ ụtọ ụtọ, ụlọ nkwakọba ihe nke vitamin, akpa ịchọ mma na ihe enyemaka mbụ n'otu oge ahụ. Nters anyị na-abịa karịsịa n'ihi na ha magburu onwe ya uto, ma na nke a n'isiokwu a anyị ga-atụ ụtụ niile ihe ụtọ ma bara uru nke mkpụrụ osisi a na-adịghị ahụkebe.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ube